Ny fahaizana manisa ny fialamboliny dia mety hahasoa ny vehivavy rehetra, ny olona iray mba hahafantarana ny andro "azo antoka", ary ny olona iray hanisa ny andro tsara indrindra ho an'ny fahaterahana. Misy fomba maro ahafahana mamaritra ny fambolena. Andeha hojerentsika ny iray amin'izy ireo, dia ny fomba famaritana ny ovulation ho an'ny excreta, tsara ihany koa, sady ho takatsika ihany koa hoe nahoana no misy entina mandritra ny ovulation.
Ny antony mahatonga ny fisintahana mandritra ny ovulation
Nahoana no miseho ny ovulation? Mitranga izany noho ny antony maromaro, ny iray amin'ireo dia ny fiparitahan'ny follicle, avy eo dia misy atody matotra. Ireo izay nanadino, tsaroanay fa aorian'ny fanombohan'ny tsingerina ao amin'ny ovaire dia manomboka atody matotra. Ary izy ireo dia karazana capsules - folicles. Taorian 'ny fotoana iray, amin' ireo follicles ireo, dia misy mpitarika, ilay antsoina hoe folule dominikanina. Avy aminy izy avy eo dia matured, vonona ny fampakarana, atody iray. Ny dingana avoakany dia matetika ampitahaina amin'ny fipoahana bitika kely ao amin'ny ovaire, ary izany dia mety hitarika any amin'ny tsiambaratelo tsy misy dikany. Noho izany, ny tsiranoka mandritra ny ovulation dia mety ho ra na mavo. Amin'ny ankapobeny, ny karazana sekrana roa dia samy hafa amin'ny fepetra, fa matetika ny famotsorana amin'ny andro fanao dia misy marika marika, fa tsy ny jaky, toy ny mandritra ny fadimbolana.
Misy fanazavana bebe kokoa momba ny fisarahana amin'ny ovulation - ireo fiovana amin'ny hormonal background. Amin'izao fotoana izao, ny vatan'ny vehivavy dia miteraka mihoatra ny estrogen. Ny fiovana amin'ny estrogen dia miteraka fanafody hormonina luteinizing, izay manome ny baikom-pihodikodina hamoaka ny atody mature. Saingy ny haavon'ny hormona estrogen ao amin'ny vatan'ny vehivavy izay heverina ho antony lehibe indrindra amin'ny fanavahana amin'ny ovulation.
Inona no tokony hatao ovaina?
Ny vehivavy tsirairay dia mihevitra fa ny tsiranoka avy amin'ny vava (raha tsy mikasika ny isam-bolana, mazava ho azy) dia ny patolojia. Saingy tsy izany foana no zava-misy, misy ny toe-javatra rehefa mahazatra ny fanolorana. Ohatra, amin'ny fisotron-dronono, ny tsiranoka marevaka fotsy, mitovy amin'ny fotsy hoditra, dia heverina ho ara-dalàna. Na izany aza, eo ambany fiantraikan'ny hormones, mety hanova ny loko ny sekretera, ary rehefa mivezivezy, sy ny fitondrana vohoka, ary mialoha ny ririnina, dia mavo. Tsy ara-dalàna ihany koa ny fitsaboana be dia be amin'ny alikaola. Saingy ilaina ny mitadidy fa tsy ny fitsaboana amin'ny ovoloka toy izany dia ny fitsipika, indraindray dia porofon'ny aretina isan-karazany.
Ny antony mahatonga ny fandatsahan-dra amin'ny ovale
Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ny antony mahatonga ny kely (tsy mitaky ny fampiasana ny vokatra fidiovana) ny fitsaboana amin'ny ra mandritra ny fivalozana dia mety ho tapaka ny folilika, izay misy vehivavy mihoson-dra kely.
Ny fitomboan'ny estrogen, izay misy fiantraikany amin'ny tranon-tsolika amin'ny tranon-jaza, dia mety ho antony maratra ihany koa.
Misy fiantraikany eo amin'ny fotoam-bolana ny fanafody. Noho izany antony izany dia mety hitroka mandritra ny ovulation ny ra.
Ny areti-mifindra sy ny areti-mifindra amin'ny taovam-pananahana.
Ny antony mahatonga ny fandatsahan-drà dia ny fampiasana fitaovana entrauterine.
Ny fihenan'ny tiroida.
Famoahana ny fanabeazana hormonal.
Ny fibibeny, ny polypes uterine, ny fanesorana ny tranon-kibo sy ny aretina hafa amin'ny fiterahana dia azo atao miaraka amin'ny fitsaboana ra, miseho eo afovoan'ny vanim-potoanan'ny ratra.
Ankoatra ny zavatra hafa, ny aretina mafy, toy ny homamiadana, dia mety ho antony mahatonga ny fandosirana mandritra ny ovulation.
Cystoscopy amin'ny bala amin'ny vehivavy - ahoana no atao?
Ahoana no hampijanonana ny tranon-jaza ao an-trano?
Endometriose - fitsaboana any an-trano
Fahatarana amin'ny fadimbolana, fitsapana ratsy
Nahoana no maratra ireo tebiteby?
Inona no asehon'ny ultrasound ny tratra?
Condyloma Flat - ny antony sy ny fitsaboana amin'ny vehivavy
Ny voa Litchi dia tsara sy ratsy
Toeram-pisakafoanana ho an'ny kapila gazy
Ny dite an-kibo - tsara sy ratsy
Ahoana ny fomba hananganana kisoa?
Lobio avy amin'ny voankazo mena - ny fomba tsara indrindra amin'ny lovia grika nentim-paharazana
Fitafy kiraro fotsy
Budapest - toetrandro
Cyclamen avy amin'ny voa
Iza amin'ireo kavia no tsaratsara kokoa - malamaso na salady mavokely?
Kitapo feno ny sampana havanana
Pantyhose miaraka amin'ny sary
Famonoana kôkômbra amin'ny voanio